बालुवाटारमा सहमति, जनकपुरमा हलचल - Viral In Nepal
Viral In Nepal Stay Update With All Nepali Trends
बालुवाटारमा सहमति, जनकपुरमा हलचल
By	admin | December 19, 2019
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच भएको चुनावी तालमेलले आगामी दिनमा नयाँ गठबन्धनको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
यसको सन्देश पनि प्रष्ट छ- नेकपा सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टीलाई पन्छाएर आउने दिनमा राजपासँग राजनीतिक हातेमालो गर्न चाहन्छ।
त्यसैले काठमाडौंमा बुधबार साँझ भएको नेकपा- राजपा चुनावी तालमेलको तरंग सिधै जनकपुरमा पुगेको छ। राजपा र समाजवादी दल मिलेर बनाएको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारको भविष्य के होला भन्ने चर्चा सुरू भएको छ। किनकी नेकपा र राजपाबीच बुधबार सुरू भएको नयाँ सम्बन्धलाई चुनावी तालमेल मात्र होइन बरू दीर्घकालीन महत्वको सहकार्य हो।
राष्ट्रिय सभामा चुनावी अंकगणित हेर्दा यसको दूरगामी राजनीतिक तस्बिर प्रष्ट हुन्छ।
राष्ट्रिय सभामा प्रदेश २ बाट रिक्त हुने चार स्थानमा माघ ९ गते निर्वाचन हुँदैछ। ती चारमध्ये अहिले राजपाका दुई, कांग्रेस र सामजवादी पार्टीका एक-एक सांसद छन्। अब नयाँ चार जना सांसदको निर्वाचनमा प्रदेश २ सभासद र स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखले मत खसाल्छन्।
प्रदेश २ मा नेकपाको सबैभन्दा बढी ३०३० मत (इलेक्टोरल कलेज) छ भने दोस्रो ठूलो मत समाजवादीसँग छ। उसको २३७६ मत रहेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेससँग २३७० मत छ भने राजपासँग २१७२ मत छ।
नेकपा जोसँग मिल्छ त्यही गठबन्धनले चारै सिट जित्ने पक्का छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग नेकपा मिल्ने कुरै थिएन। बाँकी दुईमध्ये समाजवादी पार्टी अहिले सत्तारूढ गठबन्धनमा छ। त्यसैले समाजवादीसँगको तालमेल स्वभाविक देखिन्थ्यो। समाजवादी त्यसका लागि इच्छुक पनि थियो। अझ समाजवादी पार्टीलाई उसले पहिले जितेको एक सिटमात्र दिएर आफैं तीन सिट राख्ने सुविधा पनि नेकपालाई थियो।
नेकपाले भने समाजवादीलाई पन्छाउँदै दुई सिट दिएर भए पनि राजपालाई छान्यो। त्यसैले यसलाई चुनावी नभनेर राजनीतिक गठबन्धन भनिएको हो। यसको अर्थ आगामी दिनमा पनि नेकपा समाजवादीको सट्टा राजपासँग मिलेर अघि बढ्न तयार भएको देखिएको छ।
यो सहमतिलाई राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले अहिले चुनावी तालमेल मात्रै भनेका छन्। सँगसगै यसले सत्तारूढ दलसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने उनको विश्वास छ।
नेकपाका एक नेताले भने दुई दलबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा धेरैको ध्यान नगएको बताए।
सहमतिको पहिलो बुँदामा माघ ९ गते प्रदेश २ मा चार स्थानका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दुबै दलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो नम्बरमा दुई पार्टीबीच राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नियमित छलफल गर्ने र सहकार्यको प्रकृयालाई अघि बढाउने भनिएको छ।
सन्देश प्रष्ट छ- यो नेकपा-राजपा सहकार्यको सुरुवात मात्रै हो।
यो सहमतिले सबैभन्दा बढी सशंकित समाजवादी पार्टी बनेको छ। एकातिर सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले आफूलाई छाडेर राजपासँग चुनावी तालमेल गरेको छ भने अर्कोतिर दुई वर्षअगाडि चुनावी तालमेल गरेको राजपाले आफूलाई नसोधिकन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलसँग चुनावी गठबन्धन बनाएको छ। जबकी मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनमा समेत यी दुई दलले तालमेल गरेका थिए।
नेकपा र राजपाबीचको चुनावी तालमेल अझै अगाडि बढेर सत्ता गठबन्धनसम्म पुग्यो भने समाजवादी पार्टी संघीय सरकार र प्रदेश २ को सरकारबाट पनि बाहिरिन पर्ने हुन्छ। संघीय सरकारमा समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री एंव कानुन मन्त्री छन् भने अर्का नेता मोहम्मद इस्तिहाक राई सहरी विकास मन्त्री छन्।
प्रदेश २ मा राजपासँग सहकार्यमा समाजावदीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ। समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा प्रतिपक्षमा छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवबीच पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध राम्रो छैन। यसअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा यादवलाई जानकारी नै नदिइकन प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा सरूवा गरेका थिए। समाजवादीकै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादवलाई हटाइदिएका थिए।
अहिलेको सहमतिले समाजवादी पार्टीलाई नैतिक दबाब समेत बढेको छ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले त उपेन्द्रजीलाई तपाईं हटनुस भनेरै स्पष्ट संकेत दिनुभएको बुझ्न कठिन छैन,’ राजपाका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने।
नेकपा र राजापाबीच ‘आइस ब्रेक’ भएकाले आगामी दिनमा अरू सहयात्रा हुनसक्ने उनले बताए।
प्रदेश २ को सत्ता गठबन्धनमा पनि नेकपा र राजपाबीच सहकार्य भए समाजवादी पार्टी सरकारबाट हट्न पर्ने परिस्थिति आउँछ।
प्रदेश २ को प्रतिनिधि सभा १०७ सदस्यीय छ। बहुमत पुग्न ५४ जना सांसद चाहिन्छ। अहिले समाजवादी फोरमको ३० र राजपाको २५ गरी ५५ सांसद छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेकपा प्रदेश-२ को पनि सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। ऊसँग ३२ जना सांसद छन्।
नेकपा र राजपाले यहाँ सरकार बनाउन चाहे भने समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिन पर्ने हुन्छ।
समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवले चुनावी तालमेलका लागि राजपाले हतार गरेको सेतोपाटीलाई बताए।
‘दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया चलिरहेको छ। प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार पनि छ,’ यादवले भने,’राजपाले हामीसँग एकपटक छलफल समेत गरेन। हामी त आश्चर्यचकित भएका छौ।’
नेकपाले किन रोज्यो राजपालाई?
राजपासँग सहकार्यको योजना बनाउनुको पछाडि नेकपाको दीर्घकालीन रणनीति देखिन्छ।
नेकपा र समाजवादी पार्टीको सम्बन्ध बिग्रिनुको एउटा प्रमुख कारण बाबुराम भट्टराई देखिएका छन्। नयाँ शक्ति र संघीय समाजावादी पार्टी एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेपछि भट्टराई सरकारप्रति आक्रामक बनेका छन्। सरकारमै रहेर बाबुरामले सरकारको आलोचना गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री यादवसँग गुनासो गरेका थिए।
नयाँ शक्तिसँग मिलेर बनेको समाजवादी अब ‘मधेसी’ पार्टी रहेन। पहाडमा यसले खासै प्रभाब बनाउन सकेको छैन भने मधेसी पार्टीको पहिचान पनि कमजोर भएको छ। भविष्यसम्मको योजना राखेर नेकपाले मधेसी पार्टी राजपालाई आफ्नो राजनीतिक गठबन्धनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ।
यो गठबन्धनसँगै राजपा र समाजवादीबीचको खाडल झनै बढ्नेछ। दुबै दलबीच जारी एकता वार्ता झनै चिसिने छ। यी दुई पार्टीबीच एकता भएर तेस्रो ठूलो दल बनेका भए भोलि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग चुनावी तालमेल अघि बढ्न सक्थ्यो। त्यसले नेकपालाई विशेषगरी मधेसमा ठूलो चुनौती खडा गर्न सक्थ्यो।
नेकपाले राजपा र समाजवादी पार्टीबीचको दूरी बढाइदिएर आफ्ना लागि सजिलो बनाएको छ।
नेकपाको सम्बन्ध नयाँदिल्लीसँग भन्दा बेइजिङसँग बलियो देखिएको छ। दिल्लीसँग सम्बन्ध थप सुधार्न समाजवादी दलभन्दा राजपानै बढी सहयोगी हुन सक्छ भन्ने पनि नेकपाको आँकलन हुनसक्छ।
← खप्तडमा तापक्रम माइनस ४ डिग्री सेल्सियस, हिमपात सुरु वनबासबाट दरबार नफर्कुञ्जेल गर्भवती हुँदिनन् सीता, यसको सन्देश के? →
अण्डाको फण्डाः कोलेस्ट्रोल बढ्छ, मुटु रोग गराउँछ भन्ने कुरा कति साँचो–कति झुटो ?
बाटो हेर्दा यस्तो लाग्छ- के आज म सकुशल घर फर्किन्छु!
वनबासबाट दरबार नफर्कुञ्जेल गर्भवती हुँदिनन् सीता, यसको सन्देश के?